Ny Fitbit Sense sy ny Versa 3 dia nohavaozina nahazo fanohanana ny mpanampy an'i Google | Androidsis
Eny an-tsena dia afaka mahita be dia be ny smartwatches sy ny fantsom-pandrefesana, noho izany ny mpampiasa dia manana safidy maro be hahitana ilay maodely mifanaraka amin'ny zavatra ilain'izy ireo. Ny mpanamboatra tsirairay dia miloka amin'ny rafitra fandidiana hafa, ka raha te hahazo tombony betsaka amin'izany dia tsy maintsy jerena ny mpanamboatra finday avo lenta.
Manana safidy koa isika hisafidy maodely sasany izay mifandraika amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta, toa an'i Fitbit, iray amin'ireo mpanamboatra tranainy indrindra eo an-tsena amin'ity sehatra ity ary novidin'i Google herintaona lasa izay tamin'ny zavatra hafa. miliara dolara.
Ity mpanamboatra ity dia vao avy namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny maodely Sense sy Versa 3, fanavaozana iray izay nanomboka ny antsasaky ny taona dia misy ny asan'ny ECG taorian'ny nahazoany ny fankatoavan'ny manampahefana ara-pahasalamana tany Etazonia sy Eropa. Miaraka amin'ity fanavaozana ity, ny maodely roa dia mahatratra ny kinova 5.1, kinova izay manampy vaovao mahaliana.
Aorian'ny fanavaozana an'ity kinova ity, ny mpampiasa ny Fitbit Sense sy ny Versa 3 dia ho afaka hahafantatra amin'ny fotoana rehetra ny haavon'ny oksizena ao anaty ra, ny ambaratonga azontsika fantarina amin'ny alàlan'ny fampiharana manokana na amin'ny alàlan'ireo sehatra mifanentana izay havoaka alohan'ny farany ny taona.
Zava-baovao iray hafa mahaliana hitantsika amin'ity fanavaozana ity dia hita amin'ny fanohanana ny mpanampy Google, ka nanampy an'i Alexa's Amazon. Amin'izany fomba izany, raha manana ekôzistia mpandahateny mahay Google ianao na te hanova ny an'i Amazon ho an'ireo, amin'ny alàlan'ny mikrô mikambana dia afaka miantso ianao ary mihaino azy ireo mivantana amin'ny alàlan'ny mpandahateny azy.
Raha mikasa ny hanavao ny smartwatch anao ianao na hividy iray vaovao, dia afaka manararaotra ny tolotra omen'i Amazon sy ny sisa amin'ireo magazay ho anay izahay amin'ny herinandro ambony hankalazana ny Black Friday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Fitbit Sense sy ny Versa 3 dia nohavaozina nahazo fanohanana ny mpanampy Google
Ny varotra Redmi Note dia mihoatra ny 140 tapitrisa unit manerantany